Midika ho fahasambarana ve ny fandrosoana?
"Ny mpihady vola mampisava ny maizina ka mizaha hatramin'ny faran'ny zavatra rehetra ao...Fa aiza kosa no hahitana ny fahendrena? Ary aiza no fitoeran'ny fahalalana? Tsy misy zanak'olombelona mahalala ny vidiny, ary tsy hita eo amin'ny tanin'ny velona izy." Joba 28:3, 12-13
"Indro, ny fahatahorana ny Tompo no fahendrena, ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana." Joba 28:28
Tamin'ny taona 1930, ho fitokanana ny Caisse nationale des sciences (niandohan'ny CNRS, any Frantsa), dia nanao lahateny i Jean Perrin, loka Nobel amin'ny fizika, lahateny nilazany mialoha fa «hafahan'ny siansa» ny olombelona ka hiaina «faly sy salama» ao anatina karazana Edena ho avy. Mampihomehy kely ihany izany teny izany, 80 taona mahery aty; aoriana. Marina fa tsy azo iadian-kevitra ny fandroson'ny siansa. Tena nanatsara ny zava-tsoa mampiadana eo amin'ny fiainana izy: any amin'ny tany tandrefana aloha, dia foana ny mosary, nandroso fatratra ny fitsaboana, ary tsy azo ampitahaina amin'izay nisy tamin'ny taona 1930 intsony ny fotoana lany amin'ny fitaterana. Nefa ve dia tena afaka tokoa ny olona? Iainany ve ilay fifaliana tsy misy kilema vokatry ny fivoarana ara-teknika, nampanantenain'io manampahaizana io? Sambatra ve ny olona?
Taloha lavitr'i Jean Perrin, ny Baiboly dia efa niresaka momba ny fandrosoan'ny fahalalan'ny zanak'olombelona. Nefa ambarany koa fa tsy midika ho fahendrena sy faharanitan-tsaina tsy akory izany fahalalana izany. Ny angovo nokleary, vokatry ny asa nataon'i Jean Perrin, dia mamokatra ny herinaratra ampiasaintsika andavanandro, nefa koa ampiasaina amboarana baomba manapotika. Tsy ao amin'ny fivoarana ara-karena no ahitana ny fanafahana sy ny fahasambarana, satria ny siansa dia tsy milaza amintsika izay tokony hampiasantsika ny fahefana omeny antsika. Fahendrena tsy avy amin'ny sain'olombelona voafetra no ilaintsika. Izany fahendrena izany dia ao amin'ny "fahatahorana ny Tompo", izany hoe ao amin'ny fanajana sy fahalalana Ilay Andriamanitra Mpahary antsika.
Fantatrao ve Izy, ry mpamaky havana?